FAQs - Yantai CMC Bearing Co., LTD.
Mitondra fahasimbana sy fanoherana
Amin'ny ankapobeny, raha ampiasaina tsara ny fiterahana dia azo ampiasaina mandra-pahatongan'ny fahaverezan'ny fiainana reraka. Na izany aza, mety misy fahasimbana tsy nahy mialoha, ary mety tsy mahazaka ny fampiasana azy. Ity karazana fahasimbana aloha ity, mifanohitra amin'ny fianan'ny havizanana, no fetran'ny fampiasana kalitao antsoina hoe tsy fahombiazana na lozam-pifamoivoizana. Ny ankamaroany dia vokatry ny fametrahana tsy fitandremana, ny fampiasana ary ny fanosorana, zavatra avy any ivelany no nanafika avy any ivelany, ary tsy ampy ny fikarohana momba ny fiakaran'ny hafanana avy amin'ireo hazo sy trano fonenana.
Momba ny fahasimban'ny fitondra, toy ny: ny jamin'ny peratra sy ny taolan-tehezana misy ny roulant, ny antony dia azo heverina: tsy ampy ny menaka manitra, ny tsy fifanarahana, ny lesoka amin'ny famatsian-tsolika sy ny rafitra fanondrahana, ny fidiran'ny raharaham-bahiny, ny fametrahana fametrahana azy lesoka, fiviliana hazo raha be loatra ny hira dia hifanindry ireo antony ireo.
Noho izany dia sarotra ny mahafantatra ny tena antony mahatonga ny fahasimbana raha tsy amin'ny alàlan'ny famotopotorana ny fahasimbana mitondra. Na izany aza, raha fantatrao ny masinina nampiasaina, ny fampiasa amin'ny fampiasana, ny rafitra manodidina ny fitaterana, ny toe-javatra talohan'izay sy aorian'ny lozam-pifamoivoizana, ampiarahina amin'ny fahasimban'ny fiakarana sy ny antony maro, azonao atao ny misoroka ny lozam-pifamoivoizana mitovy amin'izany.
Olana maromaro no tokony hojerena amin'ny fametrahana fametrahana
a. Ny hatevin'ny spacer anatiny sy ivelany dia tsy maintsy ampifanarahana, ary ny mifanindran-dàlana amin'ny lafiny roa amin'ny spacer dia tsy tokony hihoatra ny 0.002mm.
b. Bearings tsy maintsy voafantina. Ny elanelam-potoana anatiny sy ny fahasamihafana ivelany savaivony ny vondrona tsirairay ny bearings dia tokony ho eo anelanelan'ny 0,002 mm sy 0,003 mm, ary tokony tazonina eo anelanelan'ny 0,004 mm sy 0,008 mm miaraka amin'ny lavaka fonenana ary eo anelanelan'ny 0,0025 mm sy 0,005 mm miaraka amin'ny diary. Amin'ny tena fametrahana dia tsara kokoa ny mampifanaraka ny fitondra-tànana amin'ny ankihiben'ireo tànany roa.
d. Ny fihodinan'ny lavaka misy ny seza sy ny diary, ny coaxialité amin'ny lafiny roa amin'ny lavaka fonenana, ary ny fihazakazaky ny diary dia tsy tokony hihoatra ny 0,003mm.
d. Ny tarehy faran'ny ampahany izay mifandraika amin'ny tarehin'ireo peratra fitondra dia tokony miloko hanaovana fizahana, ary ny faritra ifandraisana dia tsy tokony ho latsaky ny 80%.
e. Tsy maintsy apetraka amin'ny lalana. Izany hoe, ny teboka avo indrindra amin'ny fihazakazaky ny radial misy ny peratra anatiny rehetra dia ampifanarahana amin'ny teboka ambany indrindra amin'ny fihazakazahana amin'ny radial journal, ary ny teboka avo indrindra amin'ny fihazakazaky ny radial izay mitondra peratra ivelany dia tokony amin'ny tsipika mahitsy rehefa apetraka ao amin'ny lavaka fonenana.
Ny fitaoman'ny hery eo amin'ny fiainana rehefa mivory sy manaisotra bearings mihodina
Mety misy antony maro izay misy fiatraikany amin'ny androm-piainan'ny bearings mihodina, izay azo hazavaina bebe kokoa avy amin'ny antony fampiasana sy ny antony anatiny.
Ny antony fampiasana dia manondro indrindra raha ny fanitsiana fametrahana, ny fampiasana sy ny fikojakojana, ny fikojakojana ary ny fanamboarana no mahafeno ny fepetra takian'ny teknika. Araka ny fepetra takian'ny teknika amin'ny fametrahana fametrahana, ny fampiasana, ny fikojakojana sy ny fikojakojana, ny enta-mavesatra, ny hafainganam-pandeha, ny maripana miasa, ny hovitrovitra, ny tabataba ary ny fanosorana ny fizotran'ny fihazakazahana dia araha-maso ary zahana. Raha misy tsy fetezana hita dia ho hita eo no ho eo ny antony ary ahitsy mba hahatonga azy hiverina amin'ny ara-dalàna. Ny fepetra fametrahana dia iray amin'ireo antony voalohany amin'ny antony fampiasana. Ny fiterahana dia matetika ateraky ny fametrahana tsy mety, izay mahatonga ny fihenjanana amin'ny faritra samihafa amin'ny fiterahana. Ny fiterahana dia mihazakazaka amin'ny toe-piainana tsy ara-dalàna ary mifarana aloha ny fiainany fanompoana.
Ny hery lehibe na kely apetraka rehefa mametraka ny fiterahana dia hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny fiainana sy ny ainy, ary koa miteraka fahasimban'ny fiterahana. Ireto manaraka ireto dia torohevitra efatra mila dinihina amin'ny fizotry ny fampiharana hery.
1. Ny hery ampiharina dia tokony ho marin-toerana sy mitovy, tsy misy fiatraikany. Izany dia mitaky ny fampiasana tsindry solika na fitaovana izay afaka mampihatra tanjaka na tsindry misintona. Rehefa tena ilaina ny fikotranana dia tsy maintsy ampandalovina amin'ny akanjo vita amin'ny varahina malemy kokoa izy io. Ny metaly nianjera dia voahidy, ary ny hery manafika dia malemy araka izay azo atao. Ny tsara indrindra dia ny tehina varahina na tantanana varahina amin'ny fametahana azy.
2. Ny fampiharana ny hery dia tokony hitohy mandra-pahavitan'ny asa. Ohatra, rehefa apetraka ny fiakarana, ny fampiharana ny hery dia tokony hatsahatra rehefa apetraka amin'ny toerana mety ny fiakarana mba hahazoana antoka fa ny endrik'ilay peratra (mpanasa lamba) dia mifanohitra amin'ny lavaka fipetrahana na ny faran'ny endrin'ny hazo soroka, ary tsy azo voahidy. Tery loatra ka tsy tafiditra amin'ny toerany.
3. Ny herin'ny hery ampiasain'ny hery apetraka dia mamakivaky ny axis amin'ny fitondra araka izay azo atao, izay mitaky ny fanamafisana ny teboka fampiharana, symmetrika ary miorina, ary ny hery dia ampiharina amin'ny alàlan'ny faritra boribory na mifanitsy amin'ny axis.
4. Aza apetaka amin'ny alàlan'ny singa mihodina, izay mila hery amin'ny alàlan'ny peratra anatiny rehefa manangona sy manala ny peratra anatiny (peratra zana-kazo), ary mampihatra hery amin'ny alàlan'ny peratra ivelany rehefa manangona sy manala ny peratra ivelany.
Inona no tokony hojereko rehefa mametraka sy manaisotra ny tadin-tseranana?
(1) Ny herin'ny hery ampiasain'ny hery apetraka dia mamakivaky ny axis amin'ny fitondra araka izay azo atao, izay mitaky ny teboka fampiharana ho mitovy, symmetrika ary miorina, mampiditra hery amin'ny alàlan'ny faritra boribory na mifanitsy amin'ny axis.
(2) Ny hery ampiharina dia tokony ho marin-toerana sy mitovy, ary tsy tokony hisy vokany. Izany dia mitaky ny fampiasana tsindry solika na fitaovana izay afaka mampihatra fihenjanana na fanerena azo antoka. Rehefa tena ilaina ny fikotranana dia tsy maintsy ampandalovina amin'ny akanjo vita amin'ny varahina malefaka. Ny metaly tsy mianjera dia voahidy, ary ny hery mitokona dia malemy araka izay azo atao. Ny tsara indrindra dia ny tehina varahina na tantanana varahina amin'ny fametahana azy.
(3) Aza apetraka amin'ny alàlan'ny singa mihodina, izay mila hery amin'ny alàlan'ny peratra anatiny rehefa manangona sy manala ny peratra anatiny (peratra zana-kazo), ary mampiditra hery amin'ny alàlan'ny peratra ivelany rehefa manangona sy manala ny peratra ivelany.
(4) Ny hery fitarihana dia tokony hitohy amin'ny fatra tokony hisy azy. Ohatra, rehefa apetraka ny fiakarana, ny hery dia tokony hajanona rehefa apetraka amin'ny toerany marina ny fiterahana mba hahazoana antoka fa mijanona eo ambonin'ny faran'ny loaka misy ny seza na eo an-tsoroky ny hazo. Tsy azo fehezina mafy loatra izy io, ary tsy azo apetraka tsy diso.
Ireo raharaha mila fiheverana amin'ny fametrahana fametrahana
1. Tsy mahazo mitrandraka, manidina, chamfer, na miatrika tarehy amin'ny fiara mandritra ny fametrahana azy. Raha tsy izany dia mora ny miteraka deformation ny peratra fitondra, izay misy fiatraikany amin'ny fahamendrehana sy ny ain'ny fiterahana. Mandritra izany fotoana izany, ny metaly voapaika dia miditra mora foana amin'ny sehatry ny fitaterana, manafaingana ny fiakananan'ny hazakazaka sy ny singa mihodina, ary miteraka fahasimbana aloha loatra amin'ny fiterahana.
2. Tsy azo atao ny mamely mivantana ny peratra fitondra amin'ny tantanana tanana mandritra ny fametrahana azy. Ny tarehin-tsoratra farany momba ny fiterahana dia napetraka akaikin'ny soroka hazo ao anatiny. Ny faran'ny famaritana ny fiakarana dia miavaka arakaraka ny fanoratana ny endriny farany na tsia. Ho an'ny bearings baolina lalina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny boribory, ny fampifanarahana ny tenany amin'ny bearings, ny bearings roller, ny bearings roller ary ny bearings roller, ny faran'ny farany tsy misy litera dia ampiasaina ho toy ny faritra ambony; fifandraisana an-jorony Ho an'ny fitifirana baolina sy fitondra mihetsiketsika vita amin'ny tapered, ny tarehy farany misy litera dia ampiasaina ho faritra misy azy.
3. Ny tsindry dia tokony hapetraka amin'ny tarehy farany amin'ny peratra miaraka amin'ny fanelingelenana fametrahana mandritra ny fametrahana azy, izany hoe rehefa apetraka amin'ny hazo izy, dia tokony hapetraka amin'ny tendrony farany amin'ny peratra anatiny anatiny ny tsindry; rehefa apetraka ao amin'ny lavaka fonenana mitondra, ny tsindry dia tokony hapetraka ivelan'ny tarehy faribolana Circle. Tsy avela handalo ny tsindry amin'ny alàlan'ny singa mihodina ary hihazona.
4. Ho an'ny bearings miaraka amina tery amin'ny peratra anatiny sy slip amin'ny peratra ivelany, rehefa mametraka, ny karazana tsy azo sarahina dia tokony hametraka ny onja amin'ny hazo aloha, ary avy eo hametraka ny hazo miaraka amin'ny fitondra ao anaty trano lavaka misy ny trano fitondra; Ho an'ny karazana azo sarahina, ny peratra anatiny sy ivelany dia azo apetraka misaraka.
5. Mba hisorohana ny fametrahana ny fiterahana dia tsy tokony hifanindry ny tsipika afovoan'ny zana-kazo sy ny lavaka mitondra mandritra ny fametrahana azy. Raha tsy marina ny fametrahana azy dia tsy maintsy sintonina amin'ny alàlan'ny faran'ny tarehy ny peratra anatiny rehefa ilaina ny fametrahana indray. Na ny fametrahana azy tsara na tsia dia misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainany sy ny fahamarinan'ny motera lehibe. Raha apetraka tsy araka ny tokony izy, ny fiakarana dia tsy vitan'ny hovitrovitra, tabataba avo, marina ambany, fiakaran'ny maripana marobe, fa mety hikatso sy hodorana koa; ny mifanohitra amin'izay, raha apetraka araka ny tokony ho izy dia tsy hiantoka ny marina fotsiny, fa hanitatra be koa ny androm-piainany. Noho izany, aorian'ny fametrahana ny fiterahana dia tsy maintsy dinihina izy io.
Fanitsiana ny fahazoan-dàlana axial Ho an'ny fametahana axial ny tadin'ny roller misy tapered, azonao atao ny mampiasa ny nut fanitsiana eo amin'ny diary, ny mpanasa fanasan-damba ary ny kofehy ao amin'ny lavaka fipetrahana, na mampiasa ny lohataona pretension hanitsiana. Ny haben'ny fahazoan-dàlana axial dia mifandraika amin'ny fandaminana ny fiterahana, ny elanelana misy eo amin'ny bearings, ary ny fitaovana amin'ny hazo sy ny seza fitondra, ary azo faritana araka ny fepetra miasa.
Ho an'ny bearings roller tapered miaraka amin'ny enta-mavesatra be sy haingam-pandeha, rehefa manitsy ny fahazoan-dàlana, ny vokatry ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny fahazoana axial dia tokony hojerena, ary ny fihenan'ny fahazoan-dàlana vokatry ny fiakaran'ny mari-pana dia tsy maintsy tombanana, izany hoe ny fahazoan-dàlana axial It mila ahitsy mba ho lehibe kokoa.
Ho an'ny haingam-pandeha haingam-pandeha sy haingam-pandeha dia tokony horaisina ny fametrahana tsy misy fahazoan-dàlana na fametrahana mialoha ny enta-mavesatra. Ny tanjon'izy ireo dia ny hahatonga ireo roller sy raceways misy bearings roller tapered hifandray tsara, hizara ara-drariny ny enta-mavesatra, ary hisorohana ny roulantes sy ny raceways tsy ho simban'ny hovitrovitra sy ny fiantraikany. Aorian'ny fanitsiana, ny haben'ny fahazoan-dàlana axial dia voamarina miaraka amin'ny mari-pamantarana dial.
Roller Pin Bearings, Heavy Rolling Bearings, Inch Single Row, Mitondra tena eo amin'ny fitondrana baolina, Mitondra Ball feno famenony, Taper Roller Bearing Arrangement,